Posted by Unknown Sidebar Widget
သည်ဟာလေးကတော့ ဘလော့မိတ်ဆွေတို့အတွက် မိမိတို့ရဲ့ဘလော့လေးမှာ ပြက္ခဒိန်လှလှလေးတွေထည့်ပြီး အလှဆင်ဖို့ ပြက္ခဒိန်လေး
လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..လိုအပ်သူများ အသင့်ထည့်နိုင်အောင် ကုဒ်ပါ
တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဘလော့ခရီးသည်ရဲ့ နည်းပညာတွေကို ကျွန်တော် အချိန်ရရင် ရသလို
အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အသက်သာဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားတင်ပြသွားမှာပါ... ဟိုနေရာသွားလုပ် သည်နေရာသွားလုပ် ဆိုတာထက် အချိန်ရပါက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လုပ်ပြီး အသင့်အနေအထားကိုဘဲ မိတ်ဆွေတို့ထံ အရောက်ပို့ပေးခြင်နေတာ စေတနာပါ..ကဲ...
အပေါ်ပုံလေးအတိုင်းနှစ်သက်မယ်ဆိုရင် အောက်မှာ ကုဒ်တွေပါ ပေးလိုက်မယ်..
►1. Login လုပ်လိုက်ပါ ဘလော့ကာကို
►2. Layout ကိုကလစ်ရပါ့မယ် မိမိတို့ Dashboard ကနေပေါ့
►3. AddaGadget ကိုကလစ်ပေးလိုက်ပါ
►5. အောက်ကပေးထားတဲ့ ကုဒ်တွေကို ကော်ပီယူ ထည့်လိုက်ပါ
<img style="visibility:hidden;width:0px;height:0px;" border=0 width=0 height=0 src="http://c.gigcount.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEzNTIxOTg1MDA5NTUmcHQ9MTM1MjE5ODUxNjc1NyZwPTIyMzA1MiZkPSZnPTEmbz*zYjFmYjcyNDYxZjM*ZjI4OTcy/ZjVkNzk4ZDg*ZDc*NCZvZj*w.gif" /><embed allowScriptAccess="never" src="http://widgia.com/widgets/pisces-calendar/pisces.swf" quality="high" width="250" height="250"></embed><br /><a href="http://widgia.com/category/astrology-widgets/" target="_blank">More horoscope widgets at Widgia.com</a>
မကျေန်ပသေးလို့ စိတ်တိုင်းကျ ယူခြင်တော့ သည်မှာ မွှေလိုကနော်.. အလိုကတော့ဝူးးးး
အောင်အောင်(မကစ) ရဲ့ ဘလော့ခရီးသည်လေးအား အားပေးနေကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်.. တုန့်ပြန်မှုအနေနဲ့ fb like လေးတော့ လုပ်ပေးခဲ့ကြပါနော်.. တတ်စွမ်းသမျှ တွေ့ ရှိသမျှလေးတွေကို ပြန်လည် မျှဝေနေပါ့မယ်...။ အဆင်မပြေတာများရှိခဲ့ပါက...
www.ledimyethar.com တို့ရဲ့ cbox မှာ ပြောခဲ့ကြပါနော်...
Blog Slider (5)
Blogger Button (4)
Blogger Comment (16)
Blogger Hack (44)
Blogger Template (42)
Blogger Tips (62)
Blogger Widget (129)
Blogs Html (53)
Blogs Post (68)
Blogs Tab Menu (37)
Fonts Download (2)
Marquee Technique (13)
New Blogs (8)
Recent Posts Widget (11)
Sidebar Widget (61)
Social Widget (16)
Software For Blogs (13)
♪ ♫ အောင်အောင်(မကစ)၏ကဗျာများစုစည်းမှု (၁) ♪♫
ခုလို ကျနော့်ရဲ့ စိတ်ကူးလေးတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ဘလော့လေးထဲကို လာရောက် အားပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေ ကျနော့်ရဲ့ ရင်တွင်ြး...
ဘလော့မှာ ကာလာကုဒ်ယူရန်ဆိုတာလေး ထည့်ကြမယ်..
မင်္ဂလာပါ မိတ်ဆွေအပေါင်းတို့.... ဒါလေးက ဘလော့အတွက် ကုလာကုဒ်တွေ ယူရန် တင်ပေးထားတဲ့ ကုလာကုဒ်ဇယားလေးတမျိုးဖြစ်ပါတယ်.. အရင် တင်ထားတာ ၂ ခုရှိပါ...
အခုတင်တဲ့ Post လေးကတော့မထင်မှတ်ဘဲဖျက်မိတဲ့ Post လေးတွေကိုပြန်ခေါ်နည်းလေးပါ။ မတော်တဆ ဖြစ်တတ်တာလေးတွေကိုပါ၊ကျနော်ကိုယ်တိုင်းလေးခဏခဏကြုံဖူးလို့...
ဘလော့စလုပ်သူများအတွက် post တင်နည်း
ကဲ မိတ်ဆွေတို့ရေ... သည်ပို့စ်လေးအတွက်နဲ့ သိတတ်ထားသူတွေက လုံးဝ စိတ်မရှုပ်စေခြင်ပါဘူးး ညီလေး တယောက်ကတောင်းဆိုထားလို့ တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါ...
Blogger များအတွက် အသုံးဝင်မယ့် Blog အချက်အလက် စာအုပ်
ဒီ စာအုပ် ကတော့ "ကိုမောင်စေတနာ" ရေးတဲ့ စာအုပ်လေးပါ ...။ Blog နဲ့ပတ်သတ်တွေကို အများကြီးလေ့လာ လို့ ရပါတယ် တခြား ဆိုက်လင့်တွေပါ ထည...
Program အလွယ်ရေးနည်း မြန်မာလို ( E Book )
ဆရာ သန်းထိုက် ရေးသားတဲ့ Program အလွယ်ရေးနည်းစာအုပ်လေးပါခင်မျာ..တောင်းဆိုထားတဲ့အစ်ကို အတွက်တင်ပေးလိုက်ပါပြီခင်မျာ Download Here အောင်အောင်(မက...
Ċ DOS_Commandနှင့်လက်တွေ့အသုံးများ.pdf View Download သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) 8512k Ċ JAVA_Developer_Guide.pdf View Download ကွန်ပျူတာဂျာနယ် 5...
မိမိ Domain အား Blogspot ဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုခြင်းဆိုရာတွင် မိမိရဲ့ blogspot.com က လိပ်စာ နဲ့ မိမိ ၀ယ်ယူထားတဲ့ Domain Name ကို ချိတ်ဆက်ြ...
အမေရိကန် ချက်ကောင်းတိုက်ကွက်များ ( ကွန်ဖူးစိုးမြင့်ရဲ့ သိုင်းစာအုပ်)
သယ်ရင်းးတို့ရေ...............မြန်မာအမျိုးဂုဏ် ဘာသာသာသနာ့ ဂုဏ်ကိုထိမ်းသိမ်းကာကွ.်ကြဖို့.... လေ့လာကြပါစို့..လေ့ကျင့်ကြပါစို့နော်...ေိေိ Dow...
Microsoft Word 2010 (မြန်မာလိုစာအုပ်)
Microsoft Office 2010 Professional setup နှင့်အသုံးပြုနည်းစာအုပ်လေးပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး Microsoft Office 2010 ကို Download ဆွဲပါ၊ပြီ...
Copyright © 2012 ချစ်ရအောင်.